Ifulethi elihle eQuartier Punta Ballena - I-Airbnb
Ifulethi elihle eQuartier Punta Ballena
Punta Ballena, Departamento de Maldonado, i-Uruguay
I-ifulethi elisevisiwe ephelele ibungazwe ngu-Sebastián
I-Quartier villa complex itholakala echwebeni elingcono kakhulu e-Uruguay, emgogodleni wePunta Ballena enokubukwa okungenakuhlulwa kolwandle, ulwandle namagquma.
Iyindawo ephuphile futhi eyingqayizivele ngempela, ungajabulela ukushona kwelanga okungenakunqotshwa endaweni ethule nemvelo. Kuyinhlanganisela ephelele yokunethezeka, ukunethezeka kanye nemvelo.
Ngaphakathi kwenkimbinkimbi ungajabulela amachibi okubhukuda, i-jacuzzi, i-spa, indawo yokuzivocavoca, ukuphepha kwamahora angama-24, indawo yokudlela kanye nenkonzo yasekamelweni yansuku zonke.
Ifulethi lise-Villa 2 ye-complex, ephakeme kakhulu futhi inombono omangalisayo. Ukuba indawo ephansi, ungakwazi ukujabulela ingadi enhle enombono ongapheli wolwandle, okudala indawo eyingqayizivele. I-complex inesevisi yangaphakathi yokudlulisa, ongayisebenzisa izikhathi eziningi ozidingayo futhi mahhala, ukuza nokuya endlini yeqembu.
Ifulethi linekamelo lokulala elilodwa, amagumbi okugeza amabili, ikhishi, igumbi lokuhlala, ithala, igaraji lakho kanye ne-WIFI.
Ithala linendawo yokosa inyama esetshenziswa kuphela, itafula elikhulu kanye negumbi lokuhlala elididiyelwe. Sinekhithi eliphelele lezitsha ze-grill ukuze ungaphuthelwa lutho uma kukhulunywa ngokukosa! Ngokungangabazeki lesi sikhala sijabulisa kakhulu efulethini, ungachitha amahora ubuka indawo kanye nendawo ezungezile.
Ikhishi lihlome ngokuphelele. Imishini yasekhishini, izitsha eziphelele zabantu abangu-6, isitofu nohhavini, i-toaster, i-blender, ijusi, ujeke kagesi kanye nomakhi wekhofi we-capsule ukuze unambithe ikhofi ngendlela othanda ngayo.
Igumbi lokuhlala line-air conditioning, umbhede wosofa, izihlalo ezimbili zomuntu ngamunye, itafula lokudlela netafula lekhofi, i-Smart TV. Uma kunesidingo, kukhona ithuba lokwengeza umatilasi.
Ikamelo lokulala livulekile futhi liyakhanya, line-air conditioning kanye ne-Smart TV. Umbono ovela ekunethezekeni kombhede awunakuhlulwa, uzovuka nomunye omuhle kakhulu e-Uruguay.
Kufakwe amathawula, amashidi nezingubo zokulala. Amagumbi okugeza ahlome ngokugcwele ane-PH nensipho yasendlini yangasese.
Hlola ezinye izinketho ezise- Punta Ballena namaphethelo